Alfa Group oo la wareegay ammaanka Madaxweyne Xasan Sheekh « AYAAMO TV
Alfa Group oo la wareegay ammaanka Madaxweyne Xasan Sheekh
2053 Views Date March 5th, 2014 time 12:18 pm
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano Alfa Group ayaa la wareegay ammaanka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo habeenadii la dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyay markii la weeraray Madaxtooyada Villa Somalia ku hoyanayay xarunta Nabad Sugidda Qaranka ee gurigii Habar Khadiijo.
Mid ka mid ah saraakiisha ammaanka u qaabilsan xarunta madaxtooyada oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa shabakadaan u sheegay in isbedel weyn lagu sameeyay ammaanka xarunta madaxtooyada Villa Somalia gaar ahaan xarunta uu ka degan yahay Madaxweynaha.
Cutubyo ka tirsan Ciidamada sida gaarka ah loo tababaray ee la dagaalama argagixisada ayaa la wareegay guud ahaan xarumihii ay horay u hayeen ilaalada Madaxtooyada Villa, iyagoona kordhiyay kontrolka iyo dhaqdhaqaaqa dadka soo gelaya xarunta madaxtooyada Villa Somalia.
Dhinaca kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isbedel lagu sameeyay goobaha uu ka howlgelayo, iyadoo guriga Habar Khadiijo looga diyaariyay guri cusub oo loogu talo galay in Madaxweynaha habeenada qaarkood uu seexdo, taasi oo la sheegayo inay qeyb ka tahay xoojinta ammaanka Madaxweynaha.
Isbedelka lagu sameeyay ammaanka Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ururka Al-Shabaab uu ku hanjabay inuu weeraro kale ku soo qaadayo xarumaha Dowladda Federaalka iyo ciidamadeeda.
Ciidamada Alfa Group oo sida gaarka ah u tababaran isla markaana qaabilsan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ayaa howlgallo dhowr ah ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxay ku soo qabqabteen dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab iyo kooxo damacsanaa inay falal amni darro ka geystaan Muqdisho iyo degaanada ku xeeran.